PrivateVPN yenye yezona nkonzo zibalulekileyo zeVPN onokuzifumana. Enye yee-greats kunye NordVPN, ExpressVPN, ProtonVPN, njl. Kodwa kufuneka uhlalutye ngononophelo onke amathuba abonelelwa yile nkonzo, kunye namanye amanqaku anciphisa anokukwenza ukuba ukhethe enye inkonzo ukuba unezidingo ezithile.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka wazi ukuba inkonzo, ngokubanzi, yenza kakuhle kakhulu ngokulindelekileyo. Kodwa njengakuzo zonke ezinye iiVPN ezihlalutyiweyo kuphononongo, ayihambelani nabo bonke abasebenzisi. Ukususa onke amathandabuzo, ndiyakumema ukuba uqhubeke ufunda…
Zenmate ngomnye wabaqalayo, ababoneleli abatsha kunabanye abebekwishishini ixesha elide. Kodwa uye wahlala kwaye ngamandla. Ezinye zeempawu zayo azinamona kwawona magqala, ide iwagqithise kwezinye iimeko.
Ke ngoko, ukuba uvavanya eyona nkonzo ifanelekileyo yeVPN kuwe, kufuneka ubandakanye iZenMate phakathi kwabaviwa, kuba Iya kukumangalisa, Nangona ingeyiyo eyona nto ingcono ...
TunnelBear ngomnye wababoneleli beVPN abaziwayo. Kodwa ngaba kuya kulunga ngokwaneleyo ukuba ufanelekele olo dumo? Ukuba uzibuza imibuzo malunga nale nkonzo, uya kukwazi ukukhupha onke amathandabuzo kwesi sikhokelo apho zonke iinkcukacha, amandla kunye nobuthathaka ziya kuhlalutywa, ukuze ukwazi ukufumanisa ukuba ihambelana neemfuno zakho okanye kufuneka ukhethe inkonzo eyahlukileyo.
Kwakhona, kuya kufuneka uyazi inkonzo yasimahla yevpn yeTunnelBear kunye nomahluko ngobhaliso lweprimiyamu, njengoko inokuba lukhetho olukhulu kwizicelo ezithile…
Zama iTouch VPN
IVPN yasimahla. Iimpawu zayo ezibalaseleyo zezi:
Izixhobo ezininzi ngaxeshanye
Ngokuqhelekileyo asicebisi ukusebenzisa ii-VPN zamahhala njengoko zinemida yazo kwaye zingakhokelela kumava omsebenzisi ahluphekileyo. Nangona kunjalo, phakathi kwezo zikhululekile ngokwenene, kukho ezinye ezinokugxininiswa ezifana Chukumisa iVPN. Le nkonzo inokufaneleka kwabo bafuna into ethile ngexesha elifanelekileyo ngaphandle kokuhlawula nantoni na.
Kunokuthiwa iTouch VPN yenye yezona nkonzo zibalaseleyo zeVPN gratis ekhoyo. Ngoku, khumbula umgaqo "xa into ikhululekile, imveliso nguwe". Ngokucacileyo, ngaphandle kwehlabathi lesoftware yasimahla kunye nevulelekileyo, akukho mntu unika nantoni na ngelize. "Isimahla" ineendleko zayo, ezifana nesantya esicothayo, ugaxekile kunye neentengiso ezicaphukisayo, ukungena kwedatha kunye nokuthengiswa kwabantu besithathu, njl.
Uyilo olucacileyo lokusetyenziswa okulula, kunye nezisombululo zokhuseleko oluphezulu, kunye neempawu zeprimiyamu ezinomdla kakhulu. Ngaphandle koko, ISurfShark VPN Yenye yeenkonzo zolwelo ezikhoyo. Ibonelela ngeempawu ezibalaseleyo kwaye inokuvula inani elikhulu lomxholo ovaliweyo kunye nee-apps ezithintelweyo.
Njengesiqhelo iSurfShark ayinangxaki. Zonke iinkonzo ziye iinzuzo kunye nokubi. Ke ngoko, ukuba ufuna ukwazi ukuba iyazifanela na iimfuno zakho, ungafunda esi sikhokelo ngawo onke amagqabantshintshi ale VPN...
ProtonVPN yenye yezona nkonzo zibalaseleyo xa kuziwa kukhuseleko, ubumfihlo, kunye nesantya. Ngamanye amazwi, yenye yeeVPN ezilungileyo kakhulu ukuba ujonge ukusebenza nayo okanye ukhangele ngokukhuselekileyo. Nangona kunjalo, akukho ngaphandle kokuphazamiseka, njengakuzo zonke iinkonzo. Enye inokuba lixabiso layo, elinye liphezulu kancinci. Kwelinye icala, indlela yayo yokusebenza kunye namaqonga okusasaza.
Ke ngoko, ukufumanisa ukuba iProtonVPN yinkonzo oyikhangelayo okanye hayi, kuya kufuneka ufunde zonke iimpawu zayo ukuze uzazi zonke. izibonelelo kunye nezinto ezilungileyo ngubani owenza le nkonzo...
Zama iHotspot Shield
I-Hotspot Shield VPN Yenye yeenkonzo ezaziwayo kakhulu kwaye iphakathi kwezona zibalaseleyo. Nangona kunjalo, njengoko kudla ngokuba njalo kwiinkonzo ezininzi ze-VPN, ineenzuzo zayo kunye nokungonakali. Ngokubanzi, iyakhawuleza, iwenza kakuhle umsebenzi wayo, ikhuselekile, kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Kuya kufuneka usifunde esi sikhokelo ukuze ubone ukuba imida inayo nayiphi na impembelelo kuyo iimfuno zakho, ukubona ukuba yile nto uyikhangela ngokwenene...
Zama iRadmin VPN
I-Radmin VPN Ayisiyonkonzo yeVPN ukuyisebenzisa. Yisoftware ekwaziyo ukuphumeza inkonzo yeVPN yasimahla ukuze abasebenzisi abaliqela bakwazi ukuqhagamshela omnye komnye ngokungathi bakwinethiwekhi yendawo yendawo okanye iLAN. Ke ngoko, kunokuba luncedo kakhulu kwizicelo ezithile, njengemidlalo yevidiyo kwimowudi yabadlali abaninzi.
Ukuba ufuna Funda nzulu malunga neRadmin VPN kwaye ukuba yile nto uyidinga ngokwenene kwimeko yakho, ndiyakumema ukuba uqhubeke ufunda yonke into oyifunayo malunga nayo ...
Ukuba ucinga ukuthenga i Inkonzo ye-ExpressVPN, kufuneka ufunde esi sikhokelo kuqala ukuze wazi zonke iingenelo kunye nokungonakali, ngaloo ndlela uqinisekisa ukuba yiloo nto uyifunayo kwaye ukuba ihambelana neemfuno zakho okanye kufuneka ukhethe inkonzo ye-VPN eyahlukileyo.
Ngokuqinisekileyo i-EspressVPN injalo yenye yezona zilungileyo iinkonzo, ezinokhuseleko oluphezulu, inani elikhulu labancedisi abanesantya esiphezulu kakhulu, kunye nenkxaso enkulu. Kwelinye icala, asiyonto inexabiso eliphantsi. Ngaba iya kuba nexabiso?
Enye yeenkonzo ezinkulu CyberGhost VPN. Uphakathi kwezona zinto zibalaseleyo kwaye akukho sizathu sokuswela. Enyanisweni, bazithengisa njengeyona VPN ekhuselekileyo emhlabeni. Ngokungathandabuzekiyo omnye walabo bacetyiswayo kubasebenzisi abaninzi abafuna inkonzo epheleleyo enokhuseleko kunye neziqinisekiso zabucala. Nangona kunjalo, njengazo zonke iinkonzo, inamandla kunye nobuthathaka okufuneka uyiqwalasele.
Apha uya kubona a uhlalutyo olupheleleyo lwazo zonke iimpawu kubalulekile ukuze ukhethe ukuba ingaba yinkonzo efanelekileyo kwiimfuno zakho...